Global Voices teny Malagasy » Voalohany Tao Anatin’ny 40 taona I Iràka No Nampiantrano An’I Arabia Saodita Na Dia Teo Aza Ny Fandraran’ny FIFA · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2018 17:41 GMT 1	 · Mpanoratra Sali Mahdy Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Iràka, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Na dia tokony ho hankalazaina aza ny fandresen'i Iraka an'i Arabia Saodita tamin'ny isa 4-1, ireo manampahefanan'ny baolina kitra Irakiana kosa dia mikendry karazana fandresena amin'ny fomba hafa. Noraràn'ny FIFA, federasiona ho an'ny baolina kitra iraisam-pirenena, i Iraka tamin'ny fampiantranoana ny lalao fifaninanana iraisam-pirenena hatramin'ny nanafihany an'i  Koety mpifanolo-bodirindrina aminy tamin'ny taona 1990 izay nitarika ho amin'ny fandrarana iraisam-pirenena. Tamin'ny volana Aogositra 1990, niditra tao Koety i Iraka ary nibodo ny toerana nandritra ny fito volana talohan'ny nirotsahan'ny mpiaradia amin'ny Firenena Mikambana antsehatra izay notarihin'i Etazonia mba handroahana ny tafika Irakiana izay nantsoina hoe ny Adin'ny Helodrano Voalohany.
Raha efa namela  an'Iraka hampiantrano lalao ara-pirahalahiana aza ny FIFA vao haingana dia mbola nandrara azy tsy handray lalao amin'ny dingana fifanintsanana Amboara Manerantany 2018 ao amin'ny fireneny.
“Manantena aho fa hanome aingam-panahy ireo ekipa nasionaly hafa mba hitsidika an'Iraka ity lalao ity, izay hanampy amin'ny fanohanana ny raharahanay amin'ny fanafoanana tanteraka ny fandraran'ny FIFA ny lalao ao amin'ny kianjabenay,” hoy i Abdulhussein Abttan, minisitry ny fanatanjahan-tena sy ny tanora, tamin'ny antsafa  nifanaovany tamin'ny masoivohom-baovao AFP.
Naneho  ampahibemaso ny fanohanany ny fanafoanana ny fandrarana i Sheikh Hamad al-Thani, filohan'ny Fikambanan'ny Baolina Kitra ao Qatar .
Namerina nanamafy ny fifandraisany indray ireo firenena roa ireo tamin'ny taona 2016 rehefa nosokafana tao Baghdad indray ny Masoivoho Saodiana ary nisy ny dingana lehibe natao mba handrosoana lavidavitra kokoa. Nikasa ny hanokatra  ny masoivoho tany Basra sy Najaf noho izany i Arabia Saodita ary nanokatra indray ny sisintany miampita an'i Arar mba hampiroboroboana ny varotra. Tao anatin'ny ezaka hanampiana ny fanarenana an'i Iraka vokatry ny faharavan'ny ady nandritra ny taona maro dia nanome  iray lavitrisa dolara Amerikana tamin'ny alàlan'ny Tahirim-bolan'ny Fampandrosoana Saodiana i Arabia Saodita.
Tsy mbola nifanandrina tamin'i Arabia Saodita tao amin'ny taniny mihitsy Iraka nanomboka tamin'ny taona 1979, herintaona talohan'ny nanombohan'ny adin'i Iran sy Iraka, ka nahatonga izany ho fotoana nisongadina ho an'ireo mpankafy baolina kitra Irakiana. Talohan'ny lalao, nanomboka  ny fanentanana tao amin'ny media sosialy i Arkan Taqi, mponina ao Basra, tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy hoe دارك_يالاخضر#  , izay midika hoe “Ry maitso, ato an-tranonareo ianareo”, ary nanome ny fandraisana an-tanandroa mafana ho an'ny Saodiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/13/116007/
 nanafihany an'i: https://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Kuwait